လှည်း | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
SBB Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’ya raylı sistem getirerek tarihe geçmek istediğini söyledi. Yüce bir de ‘lastik tekerlekli tramvay’ açıklaması yaptı Sakarya Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı Ekrem Yüce, Karadeniz Ekonomi Gazetesi’ne [ပို ... ]
ကားများနှင့်စက်ခေါင်းအမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သော Thrace အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖိုရမ်တစ်ခုမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဘယ်မှာစက်မှုလုပ်ငန်း၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အနာဂတ်ပန်းတိုင်များကိုညှိနှိုင်း ပတ်သက်. တင်ပြချက်များအပြီးတွင်ကျင်းပသည့်နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်အမှတ်ထံမှကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များ [ပို ... ]
တစ်ခုအတိအကျမသိရသေးအကြောင်းပြချက် Mersin ၏ကုန်တင်ရထားလှည်းတာရှုမွို့ခရိုင်လွဲချော်ရပ်တန့်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Mersin ထံမှ Adana, တာရှုမွို့ဘူတာမှဦးတည်ချက်ဖို့ကုန်တင်ရထားအချို့လှည်းအတိအကျမသိရသေးအကြောင်းပြချက်ချဉ်းကပ်သည့်ကာလအတွင်း [ပို ... ]
ဥဇဘက်မီးရထား TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကကိုယ်စားလှယ်များစက်တင်ဘာလ 04 2019 အပေါ် Tashkent တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Erol Arikan ဥဇဘက်မီးရထားဥက္ကဋ္ဌ Hasilov သင် Nuruddinovich Husnid ခေါင်းနှစ်လုံး [ပို ... ]
1939, 80 နှစ်အတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Sivas, တူရကီရထားလမ်းလှည်း, Ltd. စက်စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ တင်ခဲ့သည်လှည်းများအတွက်Gökyap 80 ခွကေိုကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိုကောများနှင့် ပူးပေါင်း. တစ်ဦးကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခံရဖို့ (TÜDEMSAŞ) [ပို ... ]
Sivas ထုတ်လုပ်ကုန်တင်လှည်းအဇာဘိုင်ဂျန်မှစလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်။2သည့်ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက်ကုန်တင်ကားများထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်လျှင် 600 ကားများထုတ်လုပ်ထားရန်။ ကTÜDEMSAŞထုတ်လုပ်စမ်းသပ်မှုကားများဖြတ်သန်းခဲ့လျှင်အဇာဘိုင်ဂျန်ထံမှ 36 သန်းဒေါ်လာရရှိသောလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Wagon နှင့်ခေါငျးရပ်နားခြင်းအခြေအနေ, အ Lefke ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းkazandırılıyor
CMC အဆိုပါ 21 10 လှည်းများနှင့်စက်ခေါင်းအတွက်ပျင်းရိကျန်ရှိနေသော, ခရီးသွားလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် Lefke Lefke ခရီးသွားလုပ်ငန်းခရိုင်အလုပ် 1974 တစ်နှစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်ရေးကတည်းကGemikonağı၏လွတ်လပ်သောဆိပ်ကမ်း၌ဆက်လက်kazandırılıyorရန်ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]